အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting အမြဲတမ်းမှိုလူမီနီယမ် China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:ဖိအားသေကာစ်,ဆွဲငင်အားသေကာစ်,Casting Process ကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူမီနီယမ် Die ကာစ် > လူမီနီယမ်အလွိုင်းသေကာစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း > အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting အမြဲတမ်းမှိုလူမီနီယမ်
အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ္တုများပုံသွန်းစီမံကိန်းများအတွက်။ လူသန်းပေါင်းများစွာသေဆုံး-casting လူမီနီယံအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေနေ့တိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်နှင့်အာဏာ tools တွေကိုသုံးပါ။
ရိုးရာ / သာမန်သေ-သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း, အလင်းပစ္စည်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသို့မဟုတ်လူမီနီယံအလွိုင်းအပူသတ္တုအရည်မြန်နှုန်းမြင့်ဖို့,
High-ဖိအားဆေးထိုးသတ္တုမှိုတန်ဆာ, လက်ရှိအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ (RZ)
မဂ္ဂနီဆီယမ် / လူမီနီယံအလွိုင်းရိုးရာသေ-သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများဖွဲ့စည်းအကြီးဆုံးအများစုအဆင့်မြင့်သတ္တုသည်။
Semisolid သေကာစ်ကမ်ဘာပျေါမှာသစ်ကိုသတ္တုဖွဲ့စည်းနည်းပညာအရာ, တိုတောင်းဘို့ SSC ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါမဂ္ဂနီဆီယမ် / လူမီနီယံအလင်းအလွိုင်းပစ္စည်းမြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားသတ္တုမှိုထဲမှာပုံသွင်းခံရဖို့ semisolid မှအပူဖြစ်ပါတယ်
ထုတ်ကုန်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ / တောင့်တင်းမြင့်မားတိ, ဒဏ်ငွေမျက်နှာပြင်, ချေးခုခံမရှိညစ်ညမ်းမှု ... လက်ခဏာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်။
ကျယ်ပြန့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းလက်ပ်တော့အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်မော်တော်ယာဉ်, အိုင်တီ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အခြားမြင့်မားသောဝယ်လိုအားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ချ. သေဆုံး,
မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းမှတ်စုစာအုပ်အစိတ်အပိုင်းများသေဆုံး-သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း, ဒါပေါ်တွင်တိကျစွာမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း Precision Mg ထက်ပိုမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကို Casting Die ချ. သေဆုံး,
ပေါ့ပါး, အရည်အသွေးမြင့်မားမြင့်မားထိရောက်မှု, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
ဟောင်ကောင် Jin ကပြေး Co. , Ltd Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းရိုးရာသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, tool ကိုမှို ချ. အလိုအလျောက်သေဆုံး, မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူး
ဆေးထိုးတန်ဆာများနှင့်အခြားအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှု။ 120 သန်း၏မှတ်ပုံတင်မြို့တော်တရုတ်နိုင်ငံ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းများသို့တီထွင်ထားပြီး,
အဆိုပါစက်ရုံဖြစ်ပါတယ် Dongguan စီးတီး Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ (RZ) 70000 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ 800 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သားများနှင့်အတူ
နှင့် 150 မန်နေဂျာ 101 တင်သွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း semisolid အထူးသဖြင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းဘို့, ချ. စက်တွေရှိသေဆုံးနေကြတယ်
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မြင့်မားသောတိကျဆေးထိုးတန်ဆာစက် 90. ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ချ. အကြီးဆုံးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း semisolid သေဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ထိရောက်နှင့်အဆင့်မြင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းပေးအပြောင်းအလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှု ချ. သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
B ကစက်ရုံ Fenggang, Dongguan မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးမှို Co. , Ltd (ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း) 10000 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ ရှိ
ဆေးထိုးတန်ဆာစက်တွေ၏ 30 အစုံ, 10 မှိုကုန်ထုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အုပ်စု, ဆေးထိုးတန်ဆာအတွေ့အကြုံ 15 နှစ်။ ဒါဟာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်
ဟောင်ကောင် Jin ကပြေး Co. , Ltd, နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဂရုစိုကျ 100 နီးပါးကလူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ R & D အဖွဲ့သည်ရှိပါတယ်
18 စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာမူပိုင်ခွင့် advanced ကို၎င်း, R & D အဖွဲ့သည်တစ်စုံလင်သောထုတ်ကုန်သို့ဖောက်သည်ရဲ့စိတ်ကူးလှည့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လျှောက်ထားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း BSI certified ရရှိထားပြီး ISO9001 မှတစ်ဆင့်: 2008, ISO14001: 2004 နှင့် TS16949 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်
စက်ရုံဧရိယာထဲမှာပြီးစီးခဲ့နေကြတယ်, တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်ကိုတက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူတစ်ဦးရှိပါတယ်, အမြဲတမ်းဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သည်
သတ်မှတ်ချက်များ (ပစ္စည်း, မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည်းခံစိတ်တစ်ဦးသည်အခြားလိုအပ်ချက်, etc) နှင့်သင်၏ 2D drawings သို့ပေး; သင့်ရဲ့အရေအတွက်လိုအပ်ဖော်ပြထားခြင်း
(MOQ နှင့်နှစ်စဉ်လိုအပ်ချက်) နှင့် Logistic လိုအပ်ချက်; 3D ရေးဆွဲနေတဲ့အပြည့်အဝထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့အများကြီးကြိုဆိုကြသည်။
CNC စက်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုခဲအချိန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အရေအတွက်သည်နှင့်အညီ, 1-4wks ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Customer များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်
Casting Process ကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်း